भारत पर्यटक भिसा | भारतको लागि अनलाइन पर्यटक भिसा
भारत पर्यटक भिसा
भारत eTourist भिसाका लागि आवेदन दिनुहोस्
भारतको यात्रु जसको मनसाय दृश्यावलोकन / मनोरञ्जन हो, साथीहरू र आफन्तहरूलाई भेट्न वा छोटो अवधि योग कार्यक्रम ईलेक्ट्रोनिक ढाँचामा भारत टूरिस्ट भिसाका लागि आवेदन गर्नु पर्छ, जसलाई भारतका लागि eTourist भिसा पनि भनिन्छ।
भारतको लागि पर्यटक भिसा ती आगन्तुकहरूको लागि उपलब्ध छ जो एक पटकमा 180 दिन भन्दा बढीको लागि भारत भ्रमण गर्न चाहन्छन्।
भारतमा यात्रीहरू एकका लागि आवेदन दिन योग्य छन् भारतीय भिसा अनलाइन यस वेबसाइटमा स्थानीय भारतीय दूतावास भ्रमण नगरी। यात्राको उद्देश्य गैर व्यावसायिक प्रकृतिमा हुनुपर्दछ।
यो भारतीय पर्यटक भिसालाई राहदानीमा शारीरिक टिकटको आवश्यकता पर्दैन। यस वेबसाइटमा भारतीय पर्यटक भिसाका लागि आवेदन दिनेलाई भारतीय पर्यटक भिसाको पीडीएफ प्रति प्रदान गरिनेछ जुन ईमेलबाट इलेक्ट्रोनिक रूपमा पठाइनेछ। या त यो भारतीय पर्यटक भिसाको सफ्ट प्रतिलिपि वा कागज प्रिन्टआउट भारतमा उडान / क्रूजमा चढ्नु अघि आवश्यक छ। यात्रुलाई जारी गरिएको भिसा कम्प्युटर प्रणालीमा रेकर्ड गरिएको छ र राहदानीको शारीरिक टिकट वा कुनै भारतीय भिसा कार्यालयमा राहदानीको कुरियरको आवश्यकता पर्दैन।
भारतीय पर्यटक भिसा केको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ?
भारत पर्यटक भिसा वा eTurist भिसा निम्न उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ:
तपाईं योग कार्यक्रममा भाग लिइरहनु भएको छ / e।
यो भिसा यस वेबसाइटको माध्यमबाट ईवीसा भारतको रूपमा अनलाइन उपलब्ध छ। सुविधा, सुरक्षा र सुरक्षाका लागि भारतीय दूतावास वा भारतीय उच्चायोगको भ्रमणको सट्टा यो भिसा अनलाईनका लागि अनलाइन आवेदन गर्न प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गरिन्छ।
तपाइँ ईटुरिस्ट भिसासँग भारतमा कति समय बस्न सक्नुहुन्छ?
यस भारतीय पर्यटक भिसाका धेरै विकल्पहरू अब अवधिको सन्दर्भमा आगन्तुकहरूलाई उपलब्ध छन्। यो3को रूपमा 2020 अवधिहरूमा उपलब्ध छ:
Day० दिन: भारत प्रवेश मिति देखि days० दिनको लागि मान्य र डबल प्रवेशका लागि वैध।
१ बर्ष: ETA को जारी भएको मिति देखि 1 365 दिनको लागि मान्य र बहु ​​प्रविष्टि भिसा हो।
Years बर्ष: ईटीए जारी गरेको मिति देखि year बर्षको लागि मान्य र बहु ​​प्रविष्टि भिसा हो।
Day० दिने भारत भिसाको वैधता केहि भ्रमको विषय हो. तपाईं Day० दिने पर्यटक भिसा विवरणको बारे पढ्न सक्नुहुन्छ.
नोट: त्यहाँ २०२० भन्दा पहिले भारतको a० दिने भिसा उपलब्ध थियो, तर पछि यसलाई रद्द गरियो।
भारत पर्यटक भिसाका लागि के आवश्यकताहरू छन्?
पर्यटक भिसाका लागि तलका कागजातहरू आवश्यक छन्।
तिनीहरूको हालको राहदानीको पहिलो (जीवनी) पृष्ठको स्क्यान गरिएको रंग प्रतिलिपि।
भर्खरको राहदानी शैली र color्ग फोटो।
भारत प्रवेशको समयमा months महिनाको राहदानी वैधता।
भारत पर्यटक भिसाका सुविधाहरू र सुविधाहरू के हुन्?
भारतीय पर्यटक भिसाका निम्न लाभहरू छन्:
Day० दिने पर्यटक भिसाले डबल प्रवेश अनुमति दिन्छ।
१ बर्ष र years वर्ष पर्यटक भिसाले बहुविध प्रविष्टिहरूलाई अनुमति दिन्छ।
धारकहरूले 28 एयरपोर्ट र5बन्दरगाहहरू मध्ये कुनै पनिबाट भारत प्रवेश गर्न सक्छन्। यहाँ पूर्ण सूची हेर्नुहोस्।
भारत पर्यटक भिसा धारकहरु यहाँ उल्लेख गरिएको कुनै पनि स्वीकृत आप्रवास जाँच पोष्टहरु (ICP) बाट भारतीय बाहिर निस्कन सक्छन्। यहाँ पूर्ण सूची हेर्नुहोस्।
भारत पर्यटक भिसाको सीमितता
निम्न पर्यटकहरू भारतीय पर्यटक भिसामा लागू हुन्छन्:
Day० दिने पर्यटक भिसा एक डबल प्रवेश भिसा मात्र हो।
१ बर्ष र Year बर्ष पर्यटक भिसा भारतमा १ 1० दिनको निरन्तर रहनका लागि मान्य छ।
यो भिसाको प्रकार गैर कन्भर्टेबल, गैर रद्द र गैर विस्तार योग्य हो।
आवेदकहरूलाई भारतमा रहँदा उनीहरूलाई सहयोग गर्न पर्याप्त रकमको प्रमाण दिन आग्रह गर्न सकिन्छ।
आवेदकहरूसँग भारतीय पर्यटक भिसामा उडान टिकट वा होटल बुकिङको प्रमाण हुनु आवश्यक छैन।
सबै आवेदकहरूसँग सामान्य पासपोर्ट हुनुपर्दछ, अन्य प्रकारका आधिकारिक, कूटनीतिक पासपोर्ट स्वीकार्य छैन।
भारतीय पर्यटक भिसा सुरक्षित, प्रतिबन्धित र सैनिक क्यान्टोनमेन्ट क्षेत्रमा भ्रमणका लागि मान्य छैन।
यदि तपाईंको राहदानी प्रविष्टिको मिति देखि months महिना भन्दा कममा म्याद सकिन्छ भने, त्यसपछि तपाईंलाई तपाईंको राहदानी नविकरण गर्न आग्रह गरिनेछ। तपाईंको पासपोर्टमा6महिनाको वैधता हुनुपर्दछ।
जब तपाइँ भारतीय पर्यटक भिसाको कुनै पनि मुद्रांकनको लागि भारतीय दूतावास वा भारतीय उच्चायोग जानु आवश्यक छैन, तपाइँलाई आवश्यक छ।2तपाईंको राहदानीमा खाली पृष्ठहरू ताकि अध्यागमन अधिकारीले एयरपोर्टमा प्रस्थानको लागि टिकट लगाउन सक्छ।
तपाईं भारतको लागि सडकमा आउन सक्नुहुन्न, तपाईंलाई एयर ट्राभिक भिसामा एयर र क्रूज द्वारा प्रवेश अनुमति छ।
भारत पर्यटक भिसा (eTourist भारतीय भिसा) को लागि भुक्तानी कसरी गरिन्छ?
पर्यटकहरू बनाउन सक्छन् भुक्तानी तिनीहरूको भारत पर्यटक भिसाका लागि चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा एक PayPal खाता प्रयोग गरी।
भारत पर्यटक भिसाका लागि अनिवार्य आवश्यकताहरू हुन्:
एक राहदानी कि भारत मा पहिलो आगमन को मिति देखि months महिना को लागी मान्य छ।
एक कार्यात्मक ईमेल आईडी।
यस वेबसाइटमा अनलाइन सुरक्षित भुक्तानको लागि डेबिट कार्ड वा क्रेडिट कार्ड वा पेपैल खाताको अधिकार।
कृपया तपाईंको उडानको --4 दिन अगाडि भारत पर्यटक भिसाका लागि आवेदन दिनुहोस्।
एक पर्यटक भिसाका लागि आवेदन दिनुहोस्